kariya, Private Qoyska Job Description / Meelaynta Oo Template Xisaabtanka – JobDescriptionSample.org
Home / Uncategorized / kariya, Private Qoyska Job Description / Meelaynta Oo Template Xisaabtanka
kariya, Private Qoyska Job Description / Meelaynta Oo Template Xisaabtanka
superadmin June 28, 2016 Uncategorized Leave a comment 315 Views
Kululeeyaha iyo qaboojiyaha makaanikada iyo Rakibayaasha Job Description / Doorarka iyo Template Mas'uuliyadda
Ku rakib, shirkadda, ama soo celin farsamooyinka hawada iyo qaboojiyaha kulka ee guryaha ama hay'adaha in ay yihiin ganacsi.
Dayactir ama u bedel taararka, gogo ', ama qalab khaldan.
Hubi kuwan raadkaygay korontada ama qaybo for sii, shaqaalaynta qalabka baaritaanka waa in korontada.
Imtixaan iyo hababka baaritaan si loo xaqiijiyo soo gudbinta farsamada la caddaymaha iyo fursadaha ama xataa in la ogaado oo la garto ayna.
Nala Xiriir daadanaayo ama tuubooyinka goysyada ama biyomareenka baaritaan, codsanaya cadaadis qiimeeyo kolba- kale.
Advocate, horumarinta, ama dhammayn hababka ilaalinta ee ka hortagga ah ama heerka, sida tusaale ahaan nadiifinta, xoog-dhaqidda faakiyuumka marsho, ama, xubno handaraabada, ama la beddelo sifeynta.
Saar-baxay oo link awood fiilooyinka u dhexeeya hagaajin iyo marsho, sida-waxayaala taararka, isticmaalka handtools koronto ee.
Cad ama daloolin godad ku yaala meelaha, derbiyada, ama top si ay u samaystaan ​​marsho, isticmaalka miinshaaro xoog ama carbinta.
xisaabi, hoose, thread, ama tuubooyinka hayalka san ama biibiile, codsanaya qalabka biibiile fitteris.
Abuurta ama Buur meelaha ductwork ama qaab, isticmaalka bir-shaqada in uu yahay khayraadka transportable ama qalabka alxanka.
Programmable, tijaabiso iyo rakibi barnaamijkii, ama qalabka wireless ganacsi ama qoyska guryahooda si loo yareeyo isticmaalka korontada ku saabsan kululaaneysa ama qaboojinta.
Mount dehumidifiers ama waxyaabaha xiran sida tusaale ahaan meelaha computer, ku saabsan meelaha u baahan in nidaamsan, hawada la qalajiyey proficiently qabtaan.
Mount magnetic- converters, chillers culus, ama qalabka ku xiran xaaladaha hawada laga cabsado.
Ku rakib ama lagu dhiso nidaamka hawada-isdaahirinta,, sida tusaale ahaan sifeynta gaar ah ama ultraviolet (ultraviolet) nidaamyada saabsanaa isdaahirinta, nalalka.
hiitarka geeyo qabtaa gobolka meel-yada maareeyo kululaaneysa ee qoyska ama ganacsi kaxeynayo.
Repair ama taageero kululaaneysa, hawo, iyo AC (HVAC) qalabka si loo wanaajiyo kartida, sida by sifeynta ku beddelaan, channels lagu dhaqo, ama recharging refrigerants sun aan.
Kala hadal kululaaneysa ama barnaamijka qaboojinta ayna isagoo isticmaala inay ka jaraan dhibaatooyinka ama xitaa si loo xaqiijiyo in guuldareysto ayaa waxaa cusboonaysiiyey by dayactirka.
Mount, nidaaminaya qalabka, ama xirmaan, humidistats, ama shidda.
Ku biir kulaylka ama hawo-con marsho shidaalka, biyo si ay u sameeyaan guud ahaan ganacsiga.
Details Design baari barnaamijyada, ama talooyin makersA A si loo hubiyo in ay ku rakibidda ku haboon arrimood ayaa sidoo kale si loo ogaado qaabeynta ka mid ah qaybaha kulaylka ama qaboojinta alaabta.
Joog by siyaasadaha, ugu shuruudaha ku haboon, ama geeddi-isweydaarsiga nadiif ah.
Buur arrimo kaabayaal ah tusaale ahaan stokers, hawada tuubooyinka Dami tuunbooyinka, ama gargaara ama filtarka horumarinta, qalabka kulaylka ama horjoogsado.
Record iyo sahan munaasabadda, sahay, dhibaatooyinka, filnaan la'aanta, ama xaaladaha la yaab leh oo kala duwan oo ku saabsan codsiyada shaqada.
Sharciyeyn nidaamka ka qabtaa in ay hagaajin lagu talinayaa in habka hoganaya by shirkadda.
dhis, booska, iyo lifaaq horjoogsado ama kuleylka marsho, raad qorshaha ama muuqaalada shirkada ee.
Mount ama soo celin selfcontained kulaylka dhulka-il riixo ama dabaqa hybrid ama kulaylka airsource riixo si loo yareeyo isticmaalka carbon xuddun korontada iyo in la yareeyo kaarboonka.
cover tuubooyinka, isuna kursiga in booska la isticmaalayo cable ama guutooyinkiisa oo la taaban karo.
Waxqabadka Job lagama maarmaan
Akhrinta fahamka-Aqoonta kooban cutubyada iyo cutubyada in waraaqaha shaqada ku jira ee la xiriira.
Active-Dhageeysi-Bixinta waxa dadka kale leeyihiin dareenka oo dhan, waqti isuna inaad fahamto waxyaabaha la sameeyo, codsanaya weydiimo sida ku haboon, halkii ay ka joojiyeen at jeer in ay khaldan yihiin.
Qorista-In qoraal sida ugu haboon ee rabitaanka suuqa si guul hadlaya.
Xariirinta la-Wadahadal dadka kale in la xuso xaqiiqada effortlessly.
Hababka Science-Kafaa'iidaysiga iyo xeerarka caafimaadka si aad u daaweyso arrimaha.
Halis-ka fakaraya-Adeegsanaya xukun iyo sababaynta in la ogaado xirfadaha iyo duleella u ah hababka, Natiijada ama daweyno kale ah dhibaatooyinka.
Active-Learning-ogyahay saamaynta macluumaadka cusub ee labada go'aan-qaadasho la soo dhaafay iyo mustaqbalka xalinta dhibaatooyinka iyo.
Barashada Qaababka-Doorashada iyo shaqaalaynta tababarka istaraatijiyadaha waxbarida / iyo farsamooyinka ku habboon buu u leeyahay waxbaridda gaarka ah ee xaaladda ama marka hanashada dhibcood cusub.
waxqabadka Monitoring-MonitoringPERDetermining ee shirkadaha, dadka kale, ama naftaada in ay curiyaan uqaadineed ama talaabo sixid ah qaadan.
Social Perceptiveness-Ahaanshaha ma ah mid halmaansan reactions othersA maxaa yeelay, waxay sameeyaan sababta ay u dhaqmaan iyo fahamka.
falalka la xiriira Dexterity-Beddelidda in tallaabooyin othersI.
Suuq-oolka ah dadka kale in la beddelo dhaqanka ama madaxooda.
Dhexdhexaadinta-Helidda dadka kale si wadajir ah oo isku dayaya in ay heshiiyaan kala duwanyahay,.
dadka kale wacyi-baro sida saxda ah inay u dhaqaaqdo.
Orientation-Positively Service raadinaya habab si loo caawiyo dadka.
Complex Lagu Xallinayo Dhibaatada-Go'aaminta dhibaatooyinka sare iyo dib u info xidhiidha qiimeeyo iyo in la horumariyo beddeli iyo hirgelinta xal.
Ganacsi Research-barashada u baahan tahay iyo shuruudaha item in la sameeyo design a.
Engineering Design-Samaynta ama beddelidda aaladaha iyo farsamooyinka uu u shaqeeyo shuruudaha macaamiisha.
Xulashada-Go'aansiga nooca qalabka iyo aaladaha Gear u baahnaa si ay hawshan u ah.
Wajigeeda-xiridda qalabka, daydo, fiilooyin, ama baakadaha inuu la kulmo shuruudaha.
Barnaamij-Qorista baakadaha computer ku saabsan codsiyada in ka duwan yihiin.
Hawlgallada albabka Tracking-Galitaanka, Astaamaha, ama tilmaamayaasha kala duwan si loo hubiyo in ay jirto aalad hadda si sax ah u fulineynin.
hawlaha shaqada iyo siddo-Maareynta ee alaabta ama barnaamijyada.
Qalabka Dayactirka-fulinta dayactirka joogtada ah ee qalabka iyo go'aan goorta iyo waxa sort of ilaalinta waxaa loo baahan yahay.
Dhib-Aqoonsiga sababaha dhibaatooyinka shaqada iyo doorashada waxa jihada si ay u tagaan oo ku saabsan this.
nidaamyada ama mashiinada isticmaalka hababka looga baahan yahay si qamaar-celinta.
Quality Control-Qiimeynta-Bandhigyada imtixaanka iyo baaritaan alaabta, adeegyada, ama farsamooyinka in lagu qiyaaso tayada shaqo ama aad u fiican.
View iyo Go'aan-tixgelin faa'iidooyinka iyo kharashyada la barbardhigo tallaabooyinka la filayo in la helo mid ka mid ah ku haboon.
Systems Falanqaynta-Go'aaminta waxa sort of farsamo waa in shaqeeyaan iyo sida hagaajinta xaaladaha, ganacsiga, iyo sidoo kale goob saamayn gargaarkii.
hababka ama signalada waxqabadka nidaamka iyo si waafaqsan gool mashiinka sax ah ama tallaabooyinka loo baahan yahay in la xoojiyo waxqabadka Methods Qiimeynta-Go'aaminta.
Time-Management-Maareynta muddada shakhsiyeed oo ay la socdaan kuwa kale’ munaasabadda ka mid ah.
Maamulka Financial Resources-Go'aaminta sida dakhli badan tahay in la maal-in ay hawsha dhameystirtay, iyo asasad lacagta kuwan.
Hawlgallada ee Maandooriyaha Resources-In qofka oo logu in isticmaalka habboon ee qalabka, hiilaadka, iyo qalabka lahaa baahan yahay in la sameeyo shaqo gaar ah.
Maamulka Shaqaalaha Resources-ku fiiqaya dadka, sababtoo ah waxay, isuna, iyo xiiso qabtaan, aqoonsashada dadka ugu fiican ee shaqo in.
Diploma Link ee (ama dheeraad ah degree LABA-sanno)
Dibloomada Dugsiga Sare (ama GED ama Senior High School Certificate isu-)
In ka badan 2 sano, wareegsan oo ay ka mid yihiin afar sano
Guulaha / day – 92.97%
Dulqaadasho – 92.22%
dadaal – 93.38%
Issue for Qaar kale – 90.20%
Positioning Cultural – 88.35%
Dulqaadanayn Stress – 91.20%
halaynta – 94.77%
Wacyigelinta ee Detail – 95.98%
halaynta – 90.83%
Hal-abuurka – 93.22%
Adoo ka fakaraya Analytical – 95.82%